၅၀၅-က အရ အရေးယူခံထားရသောအနုပညာရှင် ၂၄ ဦးအပါ၀င် ဆန္ဒပြမှုများကြောင့် အမှုရင်ဆိုင်နေရသူ ၄၀၀၀ ကျော်ကို အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ အမှုရုတ်သိမ်း - Myanmar Pressphoto Agency
၅၀၅-က အရ အရေးယူခံထားရသောအနုပညာရှင် ၂၄ ဦးအပါ၀င် ဆန္ဒပြမှုများကြောင့် အမှုရင်ဆိုင်နေရသူ ၄၀၀၀ ကျော်ကို အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီ အမှုရုတ်သိမ်း
MPA October 18, 2021 1 min read
အကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီကို ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုများကြောင့် ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုခံရ၍ အမှုရင် ဆိုင်နေရသူ ၄၃၂၀ ဦးအား လက်ရှိ၄င်းတို့ရင်ဆိုင်နေရသည့် အမှုများမှ ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းပေးကြောင်း စစ်ကောင်စီက ယနေ့(အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်)နေ့စွဲဖြင့် ထုတ်ပြန်ကြေငြာလိုက်သည်။
အဆိုပါ ဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုခံထားရသူအများစုမှာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြမှုများကြောင့် နိုင်ငံတော်အကြည်ညိုပျက်စေမှုပုဒ်မ များနှင့် မတရားဖမ်းဆီးတရားစွဲဆိုခံထားရသူများ ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ယင်းသို့အမှုပိတ်သိမ်းရာတွင် ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၅၀၅-က အရ အရေးယူခံထားရသောအနုပညာရှင် ၂၄ ဦးနှင့် ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင် နာမည်ကြီးလူသိများသူ ၁၀ ဦးတို့ကို အမှုပိတ်သိမ်းလိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်ပါရှိသည်။
#စစ်ကောင်စီ #အမှုရုတ်သိမ်းပေး #MPA
Terrorist SAC Drops Charges over 4000 who are Facing Charges for Protesting; including 24 Artists Facing Trials on Section 505(a)
4320 people who are facing trials after being arrested and sued for protesting against the terrorist SAC have been dropped off of the cases they are currently facing, the SAC announced today, October 18.
The majority of them are the ones who were unjustly arrested and sued on State defamation section for protesting.
In the case closure, the cases of 24 artists who were sued on section 505(a) of the Penal code and 10 social media celebrities were also closed, the statement included.
After the coup, the terrorist military has freed 23,314 political prisoners and other prisoners on February 12; 23,407 on the New Year day and over 2000 on June 30.
According to the report of the Amnesty Association for Political Prisoners (AAPP), as of October 6, the terrorist military has arrested 9028 civilians since the coup.
#SAC #CasesDropped #MPA
Tags: militarycoup MPA Myanmar News
Previous: ဖလမ်းမြို့ကို အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က လက်နက်ကြီးဖြင့် ၁နာရီနီးပါး ရမ်းသန်းပစ်ခတ်ခဲ့
Next: မန္တလေးလူငယ်သပိတ်စစ်ကြောင်း သေနတ်ပစ်ဖောက်ဖြိုခွဲခံရပြီး လူငယ်၆ဦးဖမ်းဆီးခံရ